फ्रान्स बन्यो विश्व बिजेता,फाइनल खेलमा ४-२ गोल अन्तरले हार्यो क्रोएसिया . – RadioMBC
Home > खेलकुद > फ्रान्स बन्यो विश्व बिजेता,फाइनल खेलमा ४-२ गोल अन्तरले हार्यो क्रोएसिया .
३२ असार २०७५, सोमबार १०:४३
पहिलो पटक फाइनल पुगेको क्रोएसियालाई पराजित गर्दै फ्रान्सले दोस्रो पटक फिफा विश्वकपको उपाधि जितेको छ। हिजो सम्पन्न विश्वकप २०१८ मा फ्रान्सले क्रोएसियालाई ४-२ ले पराजित गर्दै २० वर्षपछि उपाधि जितेको हो।
फ्रान्सको जितमा एन्टोनी ग्रीजमन, पउल पोग्बा र किलिएन एमबाप्पेले एक-एक गोल गरे भने मारियो मान्डुकिचले आत्मघाती गोल उपहार दिए। पहिलो पटक विश्वकप फाइनल खेलेको क्रोएसियाकोलागि इभान पेरिसिक र मान्डुकिचले गोल गरे।
यसले पछिल्लो दुई दशकमा फ्रान्सलाई विश्वकपको सर्वाधिक सफल टोली बनाएको छ। सन १९९८ मा घरेलु भूमिमा भएको १६औँ विश्वकपमा ब्राजिललाई ३-० ले पराजित गर्दै पहिलो पटक उपाधि जितेको प्रान्सले २००६ मा पनि फाइनलसम्मको यात्रा तय गरेको थियो। तर इटालीसँग पेनाल्टीसुटआउटमा पराजित भएपछि फ्रान्स उपविजेतामै चित्त बुझाउन बाध्य भएको थियो ।
चलचित्र “म्ले क्यु “को छायाँकन स्याङ्जामा
भारत भ्रमण अगाडी चैत्र २१ गते पार्टी एकता – एकता फिप्टी फिप्टी